မြန်မာကားများကြည့်ပြီး ရရှိလာသော ဗဟုသုတ ၁၀၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မြန်မာကားများကြည့်ပြီး ရရှိလာသော ဗဟုသုတ ၁၀၀
မြန်မာကားများကြည့်ပြီး ရရှိလာသော ဗဟုသုတ ၁၀၀
Posted by CharTooLan on Sep 10, 2010 in Aha! Jokes, Satire |9comments
ICT Myanmar လိုအပ်နေတာရှိရင်ပြောပေးပါဦး
ကဲ အခု ၁ ကနေ ၁၀၀ ထိ ဆုံးအောင် ဖတ်လိုက်ကြဦးနော်။ ပြီးရင် မပါသေးတဲ့
အချက် ကို ရေးပေးကြပါဦးနော်……
၃။ စားသောက်ဆိုင်တွင် စကားစမြည်ပြောမည်ဆိုပါက .. အစာလုံးဝမစားရ။
(သိပ်စားချင်လျှင် အရည်တခုခု သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မျှ စားခွင့်ရှိသည်။ )
၄။ မိန်းကလေးများ ကားပျက်လျှင် အနီးအနားတွင် ကူညီပေးချင်သော
၇။ Professional Graphic Designer တစ်ယောက်သည် Laptop ဖြင့် Touch pad
ကို သုံးပြီး အံသြလောက်ဖွယ်ကောင်းသော ဒီဇိုင်းများကို Microsoft paint
၁၄။ လူဆိုးခေါင်းဆောင်အများစုသည် ကုတ်အကျီ (သို့) Leather Jacket
၀တ်လေ့ရှိပြီး တခါတရံ ဦးထုပ်ဆောင်းတတ်ကြသည်။
၁၆။ ထောင်မှထွက်လာသူများသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်စားလေ့မရှိဘဲ
လူဆိုးများဖြင့်သာ ပြန်လည်ပေါင်းသင်းပြီး ဆက်လက်ဆိုးသွမ်းကြသည်။
၂၅။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀သည် ကင်တင်းတွင် တနေကုန်ထိုင်ပြီး
ရီစရာဟာသများပြောကာ ကောင်မလေးများကို ထိုင်ငမ်းနေသော နေ့ရက်များဖြစ်သည်။
၂၈။ ကျောင်းသူ မိန်းကလေးအများစုသည် အသံစွာကျယ်စွာကျယ်
စကားပြောလေ့ရှိပြီး၊ကင်တင်းတွင် ဟီးဟီးဟားဟား လုပ်လေ့ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
၂၉။ ထိုမိန်းကလေးများသည် ဆိုင်ထဲသို့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လာလျှင် ၀ိုင်းစတတ်ကြသည်။
၃၀။ အစခံရသော ယောက်ျားလေးတိုင်း ရှက်ပြီး အမှားမှား အယွင်းယွင်းများလုပ်လေ့ရှိသည်။
ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သွားလျှင် ယောက်ျားလေးများသည် ထိုမိန်းကလေးအဖွဲ့မှ
၃၄။ သမီးရည်းစားများသည် သီချင်းဖွင့်ထားသော ပန်းခြံထဲတွင် ပြေးလွှားနေကြလေ့ရှိသည်။
၄၀။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် ရန်ဖြစ်ပါက အဆိုပါမိန်းကလေးနှင့်ရည်းစားဖြစ်တတ်သည်။
၄၁။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အား မကျေနပ်၍
၄၄။ မူးရူးပြီးအိမ်ပြန်လာလျှင် အိမ်ရှိကောင်မလေးများအား
မတရားပြုကျင့်တတ်ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် စားပွဲပေါ်မှ ပန်းအိုလဲသွားခြင်း၊
၄၅။ အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး ပုဆိုးပြင်ဝတ်လျှင်
မုဒိန်းကောင်ဖြစ်သည်။ (မူးနေသူဖြစ်ပြီး မျက်နှာတွင် အဆီပြန်နေပါက ၁၀၀%
၅၂။ ခေတ်လူငယ်အများစုသည် Shopping Mall များ၊ Snack Shop များတွင်
၅၃။ အဆိုပါ ဆိုင်များတွင် တွေ့သမျှ ကောင်မလေးများအား မျက်စပစ်ပြခြင်း
စသည် စသည်များ စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။
၅၅။ ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအဖွဲ့များတွင် အချောဆုံးတယောက်မှ လွဲပြီး
ကျန်သော သူငယ်ချင်းများမှာ တချိန်လုံး ဟာသလုပ်ပြီး
၅၆။ ခေတ်လူငယ်အများစုမှာ မိဘ တစ်ဦး(သို့)နှစ်ဦးစလုံး မရှိတတ်ကြ။ ဦးလေး
၅၇။ စတိုးဆိုင်ရှိ အရောင်းစာရေးမများအား စိတ်ကြိုက် ရည်းစား စကားပြောခွင့်ရှိသည်။
၆၃။ ညအချိန်မတော် လမ်းမပေါ်တွင် သီချင်းအကျယ်ကြီးဆိုပြီး
ဂစ်တာတီးနေသူများကို တရပ်ကွက်လုံးက သည်းညည်းခံကြသည်။
၆၈။ ယောက်ျားလေးများသည် တစ်ယောက်တည်းပင်ဖြစ်စေကာမူ ၂ယောက်၃ယောက်မကသော
လူဆိုး၊ လူမိုက်များနှင့် ရန်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ရန်ဖြစ်သည့်အခါများတွင်
တိုက်ဆိုင်စွာ ဘောင်းဘီရှည်သာ ၀တ်ထားလေ့ရှိသည်။
၇၀။ အလွန်ချောမောလှပသော ကောင်မလေးများတွင် ခပ်ပေါပေါခပ်ချာချာ
ကောင်မလေးအား လက်ထပ်ခွင့်ရရန် ယောက်ခမလောင်းများအား ငွေဖြင့်
၇၇။ အဖြူရောင်ကုတ်အကျီရှည်ဝတ်ထားပြီး နားကျပ်လည်ပင်းတပ်ထားသူတိုင်း
ဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည်။ (သို့) ဆရာဝန်တိုင်း ဂျူတီကုတ်ဝတ်ပြီး
ခိုးရာလိုက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း .. လိုက်မရှာရန် နှင့်
ခွင့်လွှတ်စေချင်ကြောင်း .. အစရှိသဖြင့် စာရေးထားတတ်ကြပြီး .. အိပ်ယာပေါ်
သို့မဟုတ် အိပ်ယာဘေးက စားပွဲပေါ်တင်ထားလေ့ရှိကြသည်။
၈၈။ ယောက်ျားလေးအများစုကတော့ မိဘကို မိန်းမခိုးမည့်ကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်ပြီး
၉၂။ အခုနောက်ပိုင်းတွင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစကားများကိုပင် လေးနက်အောင်
တမင်ကြိုးစား ဖျစ်ညှစ်ပြောတတ်သော အကျင့်များရှိလာကြသည်။
၉၃။ လူကြားထဲတွင် အိနြေ္ဒပျက်လောက်အောင် တကိုယ်လုံးနှင့်
လက်များရမ်းခါလှုပ်ပြီး စကားပြောတတ်သူများကို .. မထူးခြားသယောင်
တော်ချက်က ကန်းကုန်တယ် အကုန်လုံး ကွက်တိဘဲ ဖတ်ပြီးတော့ ရီလိုက်ရတာ.. နဲနဲတောင် မောသွားတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် မြန်မာကား မကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပေါ့။
မှန်လိုက်လေ… မြန်မာကားက အစပိုင်း ၁၅ မိနစ်လောက်ကြည့်ပြီးရင် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ပြောလို့ရပီ… တစ်ချို့ဟာသတွေက ရီရမှာလိုလို ပြုံးရမှာလိုလိုနဲ့ ဟက်ကော့ကြီးဖြစ်ပီး ပါးညောင်းတယ်… ညစ်ညမ်း ဟာသတွေကိုအရမ်းသုံးတယ်… အိမ်မှာ အစ်မတွေ ညီမ တွေနဲ့တောင်ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဘူး…
သူတို့ကိုလဲ အပြစ်တော့ပြောလို့မရပါဘူး… လုပ်ပိုင်ခွင့်.. ထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ဘာမှမရှိဘူးလေ… ပုဂံမှာ ရုပ်ရှင်တစ်ရက်ရိုက်ရင် ၁၀ သိန်းဆိုလားပဲ.. သေချာတော့မသိဘူးနော်.. ကြားတာကိုပြောတာ… ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်တွေက အလှနဲ့သရုပ်ဆောင်တာ… ဘယ်လောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲ မျက်နှာက ဝင်းပြီး ချောမွတ် နေတာပဲ…
နောက်တစ်ချက်ထပ်ဖြည့်လိုက်ဦး ထမင်းဟင်း ချက်ရင်မျက်နှာကို အိုးမဲပေနေတက်တယ်.. ချက်တာကတော့ တိုက်ခန်းထဲမှာ ဂက်စ်အိုးနဲ့… ကဲ ကြည့်လဲလုပ်ကြဦးလို့..
မှန်ပါတယ်ဗျာ မြန်မာကားအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင် ညားစေသတည်း ဇာတ်ကားတွေချည်းပဲ
အရေမရ အဖတ်မရနဲ့အချစ်ကားဆိုလည်းဇွတ်ကိုချစ်တာ ဟာသကားဆိုလဲပေါမဆုံးပေါင်တောသုံးတောင်လို့
နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်…မင်းသမီးကဆင်းရဲတဲ့အခန်းသာသရုပ်ဆာင်တာ လက်သည်းကြတော့အရှည်ထားတယ်…တစ်ခါလာလည်းချစ်ကွဲညားပဲ.. မပြခင်ကတည်းကကြိုသိနေတာပါပဲ
ဟုတ်ပါ့နော် ကြည့်လိုက်တိုင်း မဖြစ်နိုင်တာတွေကများနေသေးတယ် နော်
ကိုယ့် ဘာသာမင်းသားလုပ် ဒါရိုက်တာလဲ သူပဲ ပြီးရင်မင်းသားက အမြဲချရင်သူပဲနိုင်နေတော့တာပဲ
မင်းသားနဲ့ လူဆိုးချနေရင်အားရပါးရထိုးတယ်ကိုမရှိဘူး… မင်းသားမနိုင်တော့ မင်းသမီး ကူ ပြီးရိုက်လို့လူဆိုးပြေးတဲ့အခန်းလဲရှိသေးတယ် နော် ….
ဟာသ ကားဆိုလဲ ပေါတာကများနေတယ် ပေါကားလို့ပေး၇မှာနော်..
မင်းသမီး၊ မင်းသားများ ဆင်းရဲတယ်လည်း ပြောသေး ခေါင်းကဆံပင်က ဂျယ်တွေနဲ့ ကော့ပြီးထောင်လို့။ အ၀တ်အစားများ ထပ်တောင်မထပ်ပေါင်။ တခုရှိသေးတယ် ကိုချာတူးလန်ရေ တောသူရေခပ်ဆင်းတယ်တဲ့ အောကတ္တီပါ ပုံတော် ဖိနပ်နဲ့နော်။ ရေအိုးသာပင့်ပြီးရွက်တာ တအောင့်လောက်ကြာလို့ လူဆိုးတွေ့လို့ ရေအိုးကွဲတော့ ရေမပါဘူး။ ရေမခပ်ပဲ လေခပ်တယ်ထင်ပါ့။ ဦးသုခက ဦးအံ့ကျော်ကို ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါနိုင်ထဲမှာ ထန်းလျှက်တောင်းထမ်းခိုင်းတာ တောင်းထဲ ခဲတွေထည့်ပြီး ထမ်းခိုင်းတယ်တဲ့။ ဆရာရယ် အလွတ်ပဲ ထမ်းလို့ မရဘူးလားပြောတော့ မရဘူး ပခုံး အနိမ့်အမြင့် မတူဘူးလို့ ပြောတာ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ မုန့်ဟင်းခါးလာပို့တယ် ပြောပြီး ချိုင့်လှမ်းပေးတာ လက်ကောက်ဝတ်မညွတ်ဘူး။ ဘာမှမပါတာသိသာတယ်။ နောက် ခရီးက ပြန်လာတာတို့ ဘာတို့ ခရီးဆောင်အိတ်အလွတ်မှန်း သိသာတယ် ကိုယ်ဟန်အနေအထားကြည့် သိသာတာကိုး။ သဏ္ဍန်လုပ် သရုပ်တူဆို ပီပြင်အောင် လုပ်သင့်တယ်။ ပရိတ်သတ်ကို လျှော့တွက် သလိုပဲ။ စိစိပေါက်ပေါက် ထပ်ပြောရင် တရာမကဘူး ထပ်ရနိုင်တယ်။
ဟုတ်တယ် ညတုန်းကကြည်ရတဲဇာတ်ကားမြန်မာအသံကလာတာ ဘယ်လိုမှန်းကိုသိဘူး မင်သားနဲမင်းသမီးကိုပဲဖေးမပြီး ကျန်တဲလူကသူတိုကိုချော့နေရသလိုချည်းပဲ အစ်ကိုတွေကလဲ အပြင်ကအစ်ကိုတွေနဲမတူဘူး အဲဒါဒါရိုက်တာတွေက အပြင်
ဒါတွေဒါတွေကြောင့်… မြန်မာကားတွေ မကြည့်ဖြစ်တာ အတော်လေးကိုကြာခဲ့ပါပြီး။
ငမူးအခန်းတွေဆို လုံးဝကို ကြည့်ချင်စိတ်မရှိဘူး။
မင်းသား မင်းသမီးတွေကို အပြင်မှာတွေ့ရင်တောင် သိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ရှေးဟောင်းသရုပ်ဆောင်တွေကို လွမ်းတယ်….(ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်း စသည်ဖြင့်ပေါ့)
အရင်ကမြန်မာကားတွေ ကြည့်ရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ မင်းသားက ချမ်းသာရင် မင်းသမီးက ဆင်းရဲမယ်။ မင်းသားက ဆင်းရဲရင် မင်းသမီးက ချမ်းသာမယ်။ မိဘက သဘောမတူဘူးခွဲမယ်။ အများစုက ပြီးရင်ညားမယ်။ မညားလို့ကလည်းမရ ။ မညားရင် ကြည့်မဲ့သူမရှိဘူး။
မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးတွေ့တာကလဲ လက်ကိုင်ပုဝါကျကျန်တာလိုက်ပေးရင်း ကားပျက်ရင်ပြင်ပေးရင်း ၊ လူဆိုးတွေ နှောက်ယှက်တာကာကွယ်ပေးရင်း နဲ့ပဲ ကြိုက်သွားကြတာများတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူတို့ ပြောနေတဲ့ mood သွင်းတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူး။ ကိုရီးယားကား ၊ တရုပ်ကားကြည့်တော့မှ mood သွင်းတယ်ဆိုတာ နားလည်သွားတယ်။